Lahatsoratra nataon'i Jack Poyntz ao amin'ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Jack Poyntz
Jack Poyntz Studio dia orinasa mpamorona tranonkala ary manam-pahaizana momba ny Shopify. Mifantoka amin'ny famoahana vahaolana amin'ny tranokala famoronana izy ireo hanampiana ireo orinasa maniry fatratra hitombo amin'ny Internet. Manaiky fanamby vaovao izy ireo miaraka amin'ny faniriana hanampy ny mpanjifany hahomby.
Torohevitra fanatsarana finday mahomby 5 maharesy anao mpanjifa
Zoma, Martsa 8, 2019 Alarobia, Oktobra 14, 2020 Jack Poyntz
Ny orinasa dia tokony hanatsara ny vahaolana amin'ny tranokalan'izy ireo handrosoana ny lalao. Io no fantsona voalohany izay andehanan'ny ankamaroan'ny olona mitady ny trano fisotroana kafe akaiky azy indrindra, ny mpifanaraka amin'ny tafontrano tsara indrindra, ary izay rehetra tratran'i Google.